China 2,5% yekutanga ma broiler anodyisa premix Kugadzira uye Fekitori | RC BOKA
concentrates mubatanidzwa wezvose zvinodikanwa mavitamini, zvicherwa, trace zvinhu uye zvinowedzera sezvakaita antioxidants, pigments uye ma enzymes akasanganiswa nemapuroteni anogaya kwazvo. Iyo protein concentrate inogadzirwa zvichibva pane chaicho zvinodiwa zvemarudzi ese kusanganisira huku, zvinokambaira uye nguruve. Iyo yekudyara inosanganisirwa inowanikwa mukuisanganisira mitengo kubva ku2,5% kusvika 35% yeiyo yakazara chikafu, zvese zvinoenderana nezvinodiwa nemutengi.
Iko kuumbwa kwe feed concentrate inogadzirwa zvichibva pane zvinodikanwa zvemhuka mukubatana nezvinhu zvemuno zviripo mbishi. Zviri mukana wekuti izvo zvakakosha zvinoshandiswa zvakatosanganiswa neeprotein sosi sezvo chikafu chichava nyore kusanganisa uye zvichizogadzira chigadzirwa chiri nani uye chakafanana. Iwo maconcrate anodziya-akasimba uye ari nyore kushandisa kugadzirwa kwemhando yepamusoro yezvipfuyo zvekudya, kuverengera varimi kuti vawane mhinduro dzakanakisa.
Broiler concentrate: kuona yakanakisa kukura, chikafu chekudya uye chakaringana chikafu chekushandura chiyero zvichireva yakawanda nyama pa kg yekudya.
Mucherechedzo weLayer: kuwedzera kuisa zvikamu uye kugadzirisa saizi yezai uye mhando zvichikonzera kuwanda uye tastier mazai.
 Nguruve inosimbisa: kukurudzira kudya kwekudya, kukura kwakakwana uye kutsigirwa kwekugaya kuona mhando yemhando yepamusoro yenguruve nyama pamutengo unodhura.
Vitamin A, Vitamin D3, Vitamin E, Vitamin K3, Vitamin B1, Vitamin B2, VitaminB6, Vitamin B12, Nicotinic acid, D-Calcium pantothenate, Folic acid, D-biotin, Ferrous sulfate, Mhangura sulphate, Zinc sulphate, Manganese sulfate, Sodium selenite, Calcium iodate, DL-Methionine, L-lysine hydrochloride, Calcium hydrogen phosphate, Choline chloride, sodium chloride, calcium carbonate, calcium bicarbonate, phytase, Lactobacillus phytate, mannanase, protease nezvimwewo.
-broiler: Imwe neimwe 2.5kg chigadzirwa ichi chakasanganiswa ne100kg yekudya.
Pashure: 5% murimi broiler feed premix
Zvadaro: Florfenicol 10mg + multivamin piritsi